Ividiyo yePstrong malunga namaxabiso amabali ekufuneka ebenayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPstrong uyaziwa ngokumitha amabali opopayi wexabiso lomntu ngaphandle kokuba abalinganiswa obenziwe ngokuqaqambileyo Ngokobuchwephesha, banemvelaphi ethanda ukubetha isimbo kunye naloo mbonisi ochitha ngaphezulu kweyure ejonge nganye yezo ziPhezulu ezantsi okanye eziPhezulu.
Kwividiyo ebonisa ezona ndawo zinomdla ekukhuleni kwabalinganiswa kunye namandla eendaba ekufuneka enawo ukutsala abaphulaphuli, ugxile kwelinye lezona zinto zibalulekileyo: Kutheni le nto eli bali kufuneka libekhona?
UPstrong uya imigaqo esisiseko yobukho bomntu njengokulahlekelwa ngumntu omthandayo nayo yonke into ehamba nayo, okanye yonke into enento yokwenza nemfundo yeemvakalelo ethi ngenxa yokubethwa esikufundayo ebomini bethu ngokungathi besingakhange sinyathele esikolweni apho bekufanele ukuba sifumene khona ubulumko Ingcebiso.
Zizo ezo zihloko eziphendula loo mbuzo wokuba kutheni le nto ibali kufuneka lixelwe. Ayiloxabiso elingaphezulu kwaphela kwaye, kwinkqubo yoqoqosho esekwe kwimali, bayavuka ngamandla amakhulu okufumana imvakalelo esentliziyweni ebetha ngokungalawulekiyo xa bebona ezinye iinxalenye zobomi babo zibonakaliswa koko kuhlala khona abalinganiswa bakaPstrong kwifilimu nganye.
UPstrong uthi iimovie zeDisney ikakhulu zisekwe kwintombazana eshiya phantse yonke into iyinkwenkwe angayaziyo. Ngelixa bakho bafune imigaqo yabantu onokuxelelwa ngento yokudlala enomdla okanye iimvakalelo ezenzelwe wena engqondweni yentombazana encinci.
Kulapho uPstrong afuna ukugxila khona fundisa ngokwasemphefumlweni ngeemovie zakho. Imfundo yeemvakalelo engekhoyo ezikolweni kwaye, njengoko benditshilo, bubomi ngokwabo ukuba, kuqhuma emva kokubetha, kusifundisa. Ingxaki enkulu kukuba mhlawumbi, xa sisazi ukuba uza kuwaphilisa njani loo manxeba, kuya kuba kade ukuba sikwazi ukuwabuyisa ngokupheleleyo.
UPstrong ufumanisa kwi-3D eyona ndlela yokuhambisa la mabali ukuze thinta ubukrelekrele nentliziyo kwezi zigidi zababukeli eziqokeleleneyo njengentsapho ukuzibona. Idinomineyitha eqhelekileyo eye yakwazi ukuthatha uPstrong ukuya phezulu kukuba nabani na nabuphi na ubudala bangachongwa ngamabali abo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Ixabiso elibaluleke kakhulu likaPstrong xa kuziwa ekubaliseni ibali